Archive du 20190221
ARENA Ivandry Adino ireo sahirana, ny be palitao sisa tafiditra ao
“Adinony ianao fa fitaka ny toky …”, hoy ilay hiran’ny mpanakanto iray izay.
« Ho kandidà solombavambahoaka ny tenako amin’izao fifidianana izao ho mariky ny fampandraisana andraikitra ny tanora amin’ny fitantanan-draharaha sy fampandrosoam-pirenena mifanaraka amin’ny tarigetran’ny fitondrana ankehitriny »,
Boxe Chinoise eto Madagasikara Mikarakara hetsika iraisam-pirenena
Taorian’ny nitsanganan’ny « Commission Malagasy de Boxe Chinoise » tantanin’ny filohany, Ratsimbazafy Tantely ny volana jolay 2018, izay rafitra ao anatin’ny Federasion’ny Ady totohondry
Tsipy kanetibe « Doublette Mixte 2019 » Fantatra avokoa ireo ekipa 16 hiatrika ny Grande Finale
Taorian’ireo dingana roa notanterahana tetsy amin’ny “boulodrôme Cbt” tetsy Mahamasina ny 26-27 janoary 2019 sy ny 16-17 febroary 2019 lasa teo dia fantatra avokoa ireo ekipa 16 hiatrika ny “Grande Finale”
Ligin’ny baolina kitra Amoron’i Mania Tompondaka ny Jofama Fc
Tontosa tamin’ny alahady 17 febroary 2019 tao amin’ny kianjan’Akorombe Ambositra, nasian’ny ligy fanamboarana goavana, ny lalao famaranana ny fiadiana ny tompondakan'ny ligy Amoron'i Mania eo amin’ny taranja baolina kitra.
Edito Tsy hita fototra
Hiditra amin’ny volana faharoa ankehitriny ny fitondrana Rajoelina. Amin’ny ankapobeny dia zava-droa loha sahady farafahakeliny no fanamby tsy tanterak’izao fitondrana izao.
Fampandrosoana an`i Madagasikara “Laharam-pahamehana ny fanabeazana sy ny fahasalamam-bahoaka”
Nijoro ara-dalàna ny volana desambra 2018 teo ny fikambanana Tsiorintsoa, ahitana sehatra samihafa miasa ho an`ny toekarena sy ny sosialy.
CB vaovao any Tsaratanana Nofofoin’ny jiolahy sahady ny ainy
Vao notendrena ho CB na « Chef de Brigade » ao Tsaratanana, ny CP, Chef de poste avancé tao Sarobaratra.
v Tany nisy naka an-keriny Hanao ampamoaka i Jean Nirina HAFARI
Be loatra ireo tanim-bahoaka misy maka sy manodinkodina eto amintsika. Anisan’izany ny kianja filalaovam-baolina etsy Anosizato sy ny lalam-pirenena I am-pitan’ny biraon’ny HAFARI Malagasy izay nisy namefy ka làlana kely feno loto sy lasa fieren’ny jiolahy sisa no ampiasain’ny mponina ankehitriny.
Ora-mikija sy rano miakatra Traboina ny any Atsimon’ny Nosy
Faly sahirana ny mponina any Atsimo Andrefan’ny Nosy noho ny oram-be tsy nifankahitana nateraky ny haratsian’ny toetr’andro vokatry ny tangoron-drahona matevina.
Traboina Ambanin’Ampamarinana Nialan’ny fitondrana ny fitsaboana ireo Marary
Very fanahy mbola velona ! Nimenomenona ireo traboina napetraka eny Andohatapenaka, nalaza fotsiny tany am-boalohan’ny loza ireo mpitondra, hoy izy ireo, fa nanjavona ny fandraisan-tanana amin’ny fitsaboana.
Banky eto Madagasikara Lafo loatra ny zana-bola alainy
Tsikaritra tato ho ato ny fitsanganan’ny banky, indrindra ireo lehibe (primaire), manerana ny faritra Analamanga, eny fa manerana an’i Madagasikara mihitsy.